Ukunyamekela i-lionfish eyaziwa ngokuba yi-scorpion fish | Ngeentlanzi
Ukunyamekela i-lionfish eyaziwa ngokuba yi-scorpion fish
El Intlanzi yeengonyama ithathwa njengenye ye ezona ntlanzi ziyingozi zehlabathi ngenxa yetyhefu yalo. Yaziwa njenge Iintlanzi ze-Scorpion Uyilo lwayo olunemibala sisilumkiso sokuba luyisampulu eyingozi kakhulu kwabo bazama ukuba nayo njengesihombiso.
Umzimba wakhe oqhelekileyo enemigca ngemibala ukusuka kwiitoni ezibomvu ukuya kwezimdaka ngokungathi liqwarhashe. Igama layo libangelwa yinto yokuba inamathela ameva ayo ayityhefu kwisitayile sikadadada kwaye yenza nomonakalo ofanayo.
Inkulu, yomelele, icwecwe kwaye uzele yimithi eninzi Ziqulathe ityhefu ekufuneka ulumke kakhulu ngayo, nditsho nasebantwini kuba ukulunywa yintlanzi eyaziwayo yoonomadudwane kunokuchaphazela kakhulu.
Su Indawo yokuhlala yendalo ngamanzi anetyuwa kunye namatye okufihla Kuba yindlela ezifihla ngayo, ayihlali ihlasela abantu kodwa ukuba kufuneka sibeke isandla kwi-aquarium, yenze ngononophelo kwaye ukuba kufuneka sibambe ingonyama, kungcono ukuyenza nge iinwele ukuthintela ukuhlaba. Yintlanzi yasebusuku ethanda ukuzola emini.
Ukuba sifuna ukuba nentlanzi yoonomadudwane kwi-aquarium, kufuneka sikhumbule ukuba iyi indawo enobungozi kakhulu. Kufuneka babe ziintlanzi ezilinganayo kuba ezincinci ziyazitya, nangona kuyacetyiswa ukuba zigcinwe zodwa ngokupheleleyo.
Nangona ukutya kwabo kunokuba kwenzelwe iintlanzi zamanzi anetyuwa, yi Intlanzi etyiwayo etya iintlanzi eziphilayo kunye nee-crustaceansKuyacetyiswa ukuba unike intlanzi enetyiwa kunye neembaza. Singabaqhela nokuzitya zifile, okokuqala kuya kubabiza ukuyenza loo nto kodwa ukuba sinazo singazityi iintsuku ezimbini, ukuze balambe, xa sibanika abayi kubadelela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Ukunyamekela i-lionfish eyaziwa ngokuba yi-scorpion fish
I-lionfish, sisitshabalalisi esihlaselayo kwiicaribbean